Home Wararka Booliska Canada oo gacanta ku dhigay Abilaziz Mohamed oo dilal geysaty
Booliska Canada oo gacanta ku dhigay Abilaziz Mohamed oo dilal geysaty
Booliska Canada ayaa Abilaziz Mohamed oo ah Soomaali ay aad u aad doondooneysay dowladda Canada ka dib markii la helay ku saabsan halka uu ku sugan yahay.
Canada ayaa Soomaaligan dul dhigtay Abaal-marin lacageed oo dhan 250,000 oo dollar taasoo la siinayo cidii soo sheegta ama sababta xariga Maxamed, si dadka loogu dhiirigaliyo inay Booliska u soo sheegaan hadii ay arkaan.
Taliyaha booliiska Toronto James Ramer oo ka hadlay xariga Abilaziz Mohamed ayaa aad u soo dhaweeyay in ninkan oo ay muddo badan baadigoobayeen gacanta lagu soo dhigo.
Maxamed ayaa waxaa baadi goobayay booliiska Toronto waxaana lagu soo eedeeyay inuu dilay nin dalkaas u dhashay oo lagu magacaaabi jiray Craig MacDonald oo 43 jir ah kaasoo ku dhashay Magalaadda Toronto.
Previous articleAhlu-Sunna oo abaabul cusub ka bilaawday Galmudug iyo cabsi ka dhalatay
Next article(XOG) Deni oo markii 3aad si farsameysan u isticmaalay siyaasiyiinta Hawiye
Safiirada Mareykanka iyo Ingiriiska oo kulan la yeeshay Lafta-gareen iyo Farriin...
Madaxweyne Geelle oo siweyn loogu soodhaweeyay Muqdisho